Kasaaraa Tilmaama Hin qabne oromoo irratti waggoota lamaan kana keessa raawwachaa jiruuf eenyu itti gaafatama ?? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKasaaraa Tilmaama Hin qabne oromoo irratti waggoota lamaan kana keessa raawwachaa jiruuf eenyu itti gaafatama ??
Waggoota 27 guutuu Securty TPLF ta’anii warri Adda dureen dhiiga oromoo dhangalaasaa ture eenyu? Jarri kun Lamaan waliitti dhufeenyi isaanii Maal irratti ture ?
-kana booda Aangoof jecha oromoon wal Hin ajjeesu.Kkf.Waadaa sobaa .Seenaa sobaa.Yakka seenaa fi seera jalaa isa Hin baafnee afuufaa ture.
Wal dhabaniiru Abiy fi Lammaan waadaa oromoof galan deebisuu irratti jedhamnaan soba Anaafii Abiy du’a qofatu addaan nu baasa jedhee media irratti dubbate.
Diraamaan moofaa Abiy fi Lammaa jidduu jiru maali ?Dhuguma Lammaa fi Abiy dhoksaan waliin hojjechaa jiru moo miti ??
Yoo waliin Hin hojjenne ta’e maaliif waadaa gale Ganee dhokatee qaawwaa keessaan waan oromoo gochaa jiru maaliif callise ilaalaa jira.Yoo biyya keessatti sodaate waan Yaroo adda addaa biyya alaa bahee meeshaa waraanaa bitaa jiruuf alatti afee haqa jiru maaliif nutti himuu dide ?
Walga’ii pp irratti hirmaachaa jira.Achi irratti mormiin dhiyeesse Hin jiru ? Maaliif ?
Bara Techonolgy fi Qubee Generation waanti dhokatu Hin jiru.yaroo Ammaa kana Diinni fi firri oromoo addaan bahee beekamee galmeffachaa deemaa jirra .Dooniin Qabsoo oromoo harcaasaa deemaa jirti.Guyyaan yakka oromoo irratti warri hojjechaa jirus seeratti dhiyaatan Fagoo miti.Qabeenya saammachaa jiranis odiiti ta’ee uummata oromoof deebi’us Fagoo miti.Diinni oromoo fi firri oromoo addaan bahuu qaba.Diina dura Ni dhaabbanna .Fira waliin Qabsoo itti fufna.Lammaan fira oromooti moo Diina Dhokataa oromoo ti ? Waadaa sobaa Lammaan oromoof galee oromoon harki caalu yaroof amanee harka rukuteefii turee dhumni isaa Oromoof salphina ,Hidhaa,Ajjechaa,Tufii fi dararama oromoo irratti waadaa sobaa Lammaan galee ganeen oromoo irratti raawwachaa jiruuf itti gaafatama jalaa Hin bahu.
Walgahii dhaqne turre garuu ijaan wan nama barbaadaniif silki qabanne seenu hin dandenye. Xiqqo ni ulfaata ture.Walgahichiis akkana ture Biyyii oromoon bira bulchitu hin jiru.Mootumman amma jiru kun kan oromoofii oromiyaa qofaf hojjatuudha.
Nama biyya kana kessa taa’ee biyya tana shororkessa jirus ni beeyna.Qeerroon as kessa taa’ee konkoolaata nama caccabsa jiruus ni beyna.Mootumman kana boodas dhufee isin bulchu hin jiru.Haadhaafii abbaan ijolleen kessaan wan hojjacha jiran qoradha.
Paartii takkalle hin deggarina jawariis hin deggarina abiyyiis hin deggarina isin hawaasa wan taatanis callisati jiradha.Warren A/ Hacaaluu hundessa ajjeses TPLF fii shaneedha. Kana ture waltajjin magaalaa miicaata kessatti ta’ame har’a”
አፈትልኮ የወጣውን ቪዲዮ ተከትሎ